Global Voices teny Malagasy » Frantsa: Ethylotest Tsy Maintsy Atao Hisorohana Ny Alikaola Eny Am-pamiliana Fiara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Aogositra 2012 1:47 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Andrefana, Frantsa, Fahasalamàna, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Manomboka ny 1 Jolay 2012, ny mpamily fiara misy maotera rehetra ao Frantsa dia tsy maintsy mandalo ‘éthylotest’ daholo araka ny didim-panjakana nivoaka tao amin'ny Gazetim-panjakana  tamin'ny Alakamisy 01 Martsa 2012. Io fepetra io dia heverina hampihena ny isan'ny loza aterak'ireo mpamify tsy ampy fiheverana domelin'ny alikaola.
Ao amin'ny tranonkala Le Plus du Nouvel Observateur Mathieu Sicard  no manazava ilay fepetra vaovao  :
Tsy maintsy mampiseho iray mbola mandeha tsara amin'izany an'ireo polisy manakana anao ianao. Raha toa ianao nisafidy ilay karazany misy “cristaux”, dia tsy maintsy manana roa ianao raha kely indrindra (ny iray dia ilay notsofinao talohan'ny niainganao, ary iray vaovao haseho azy). Roa taona ny fe-potoam-pahavelomany . Hevero koa araka izany ny hijery ny datin'andro maha-ara-dalàna azy.
Mahay mifidy, na ny zava-pisotro misy alikaola na ny familiana. Sary avy amin'ny mpanoratra
Jean-Baptiste le Dall , mpisolovava ao amin'ny fitsarana sady filoha lefitry ny “Automobile Club des avocats”, dia mampahatsiahy  koa fa efa hatrany amin'ny taona 1970 ny momba ny tsy maintsy hanànana “éthylotest” ao anatin'ny fiaranao, saingy nijanona ho natoritory io fepetra io noho ny tsy fisian'ny didy fampiharana. Mipetraka araka izany ny fanontaniana mikasika ny fahafaha-mampihatra azy  :
Dia inona no holazaina mikasika ny mpamily iray izay mihevitra ny tenany fa manaraka ny lalàna rehefa avy nampiasa ny “éthylotest” nananany sy nitahiry izany am-bolana maro tao anatin'ny vata fitehirizan'ny fiarany, ary voataritarika eny amin'ny fitsarana avy eo noho ny fandraisana alikaola teny ampamiliana ? Inona no holazaina momba ny fanahy niniana namily fiara tanaty hamamoana ?
Marobe ireo loza mahavoarohirohy mpamily tanaty hamamoana vokatry ny alikaola na zava-mahadomelina, indrindra fa an-tanan-dehibe, niteraka hatezeram-bahoaka.
Loza amoizan'aina, miverimberina
Ny 22 jolay, mamily mpisetrasertra iray nitondra fiara matanjaka iray, no nifaoka  renim-pianakaviana iray sy ny zanany vavikely 11 taona tao anaty faritra natao ho an'ny mpandeha an-tongotra tao amin'ny boriborintany faha-XIX tao Paris. Nandositra ilay mpamily nahavanon-doza sy ireo mpandeha niaraka taminy. Minitra vitsy taty aoriana izy ireo no tratran'ny polisy . Ilay mpamily mpisetrasetra, araka ny lahatsoratra navoakan'ny  sehatra forum-politique.org dia olona iray :
nambara fa «jiolahim-boto mpamerin-keloka», Jiyapirasanthan J. dia fantatra aminà raharaha miisa 22. ….fantatra amin'ny fisandohana anaran'olona ihany koa ilay mpamily, fanafihana mitam-piadiana ary koa taminà korontana nitranga taminà hetsika ara-panatanjahantena iray.
Tanatinà loza iray hafa, io andro io ihany dia mpamily fiara iray, 24 taona, no niteraka ny fahafatesan'ny vehivavy iray 22 taona tao Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ary nandositra ihany koa. Nandritra ny faran'io herinandro io ihany, lehilahy iray no naratra mafy tao Saint-Georges d’Oléron raha toa kosa ny zanany lahy ka mbola miady mafy amin'ny fahafatesana .
Ao Frantsa, maherin'ny 450 000 ireo mpamily fiara  mifamoivoy tsy manana fahazoan-dàlana. Hita amin'ireny tranga rehetra ireny fa, ireo mpamily mpisetrasetra dia tsy nisy nanana fahazoan-dàlana hamily, nandositra sy namela ireo niharam-doza hitsirara amin'ny tany ary nanana tahanà alikaolateo anelanelan'ny 0,5 sy 0,8 grama tany anatin'ny ràny. Araka ny tranonkala Plan B, ny tahan'alikaola amin’io haao io dia iharan'ireto famaizana manaraka ireto :
Raha toa ny tahan'alikaola ao anaty rànao eo anelanelan'ny 0,5 sy 0,8 grama isaky ny litatra : dia mety handoa lamandy 135 euros ianao ary ho very isa enina amin'ny fahazoan-dàlanao hitondra fiara.
Ny 30 Jolay lasa teo, zazalahy kely iray 11 taona no maty teo amin'ny sisin-dàlana teo anatrehan'ireo niteraka azy, noho ny nataonà mpamily iray nanana tahan'alikaola 1,18 g/litatra . Hita fa rehefamihoatra ny 0,8 mg , ny sazy dia ny fisintonana ny fahazoan-dàlana hamily sy fampidirana am-ponja mety ho tonga hatramin'ny 2 taona, ary lamandy 4 500 euros, fihazonana ny fiara ary fisintonana isa enina ihany koa. Ny seha-pirenena iraisan'ireo ministera ho fanaraha-maso ny fahazoana antoka ny fifamoivoizana an-dalambe dia mamoaka  araka izany, fa:
mijanona ny antony voalohany amin'ny tsy fanarahan-dalàna miteraka fahafatesana eny ampamiliana ny fitondrana fiara anaty hamamoana, dimy taona mifanesy izao : ny 2010, maherin'ny 30 % tamin'ireo olona maty teny amin'ny arabe no nateraky ny loza avy amin'ny alikaola. Raha toa tsy nitondra fiara tao anatinà fatran'alikaola tafahotra ireo mpamily voatondro ho tompon'andraikitra, dia aina 1 150 no tsy nafoy.
Niteraka onjam-panoherana teny anaty fampahalalam-baovao teny ireny zava-mitranga andavanandro ireny. Marobe ireo mpihaino niantso an-telefaona tamin'ny fampielezampeo mba haneho ny hasosorany na nanoratra fanehoan-kevitra tany anatin'ireo tranonkalam-baovao marobe tany.
KrisVador manoratra hoe  :
Nahoana no famonjàna 10 taona monja ho an'ny olona iray izay – raha raisina hoe fitaovam-piadiana ihany koa ny fiara- nahafaty olona roa an-kitsirano izao ? Raha ny fomba fijeriko aloha, dia vono olona izany, ilay fiara no fitaovam-piadiana, na niniana natao na tsia
Mpamaky iray tao amin'ny leparisien.fr no manamarika  tanaty lahatsoratra iray nivoaka momba ny iray tamin'ireo loza :
Izaho “mahalala” olona iray nigadra 1 taona noho ny fifaohana tanora iray, noho ny hamamoany sy n y tsy fananany fahazoan-dàlana mamily fiara, niampy fandosirana.
Grund mamaly mpamaky iray, dia manoratra momba io lahatsoratra  io ihany :
Raha nisy fahafatesana tsy narahana fanahy niniana natao, dia tafiditra amin'ny hoe vono olona tsy niniana/noeritreretina ilay izy, na natao tamin'ny fiara izany, na antsy, na basy na ‘râteau’. Raha averintsika raisina ny ohatra notanisainareo, tiako ny manamarika sahady fa tsy manova na inona na inona amin'ny zava-misy ny hoe toe-tena nentin'ny alikaola satria ilay zava-mitranga dia mety hitranga koa na dia tsy nihinan-kanina aza. Ataoko hoe mety hanamaivana ny famaizana izany satria ilay voampanga dia afaka miteny hoe tsy nahafehy ny zava-nisy sy ny fihetsiny.
Mumbly, mpamaky iray ao amin'ny liberation.fr manampy hoe  :
Rahoviana ny fitsarana no handefa ireny mpamono olona ireny hifonja mandritra ny 20 taona raha kely indrindra, amin'izay fotoana izay, angamba mba hanomboka hisaintsaina ind-droa ry zareo alohan'ny hifamoivoizany aminà “circuit 24″ iray (lalàna miasa 24 ora)…
Nahafahana nampihena ny isan'ny maty teny amin'ny arabe ny ady mba hisian'ny làlana azo antoka nanomboka tamin'ny 1970, saingy nitohy nitombo kosa ireo loza naterak'ireo olona tsy manana fahazoan-dàlana hamily fiara na nentin'ny hamamoana tamin'ny 1999 hatramin'ny 2010.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/08/25/37639/
 Mathieu Sicard: http://leplus.nouvelobs.com/mathieusicard
 fepetra vaovao: http://leplus.nouvelobs.com/contribution/581940-ethylotest-obligatoire-dans-les-voitures-securite-ou-business.html
 Roa taona ny fe-potoam-pahavelomany: http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120301.AFP9061/ethylotest-obligatoire-dans-toutes-les-voitures-a-partir-du-1er-juillet.html
 Jean-Baptiste le Dall: http://leplus.nouvelobs.com/droitautoparmaitreledall
 dia mampahatsiahy: http://leplus.nouvelobs.com/contribution/341956-ethylotests-obligatoires-dans-les-voitures-les-paradoxes-de-la-loi.html
 no nifaoka: http://www.liberation.fr/societe/2012/07/23/commentaires/une-mere-et-sa-fille-tuees-par-un-chauffard-a-paris_834953
 no tratran'ny polisy: http://www.liberation.fr/societe/2012/07/23/une-mere-et-sa-fille-tuees-par-un-chauffard-a-paris_834953
 lahy ka mbola miady mafy amin'ny fahafatesana: http://www.bfmtv.com/week-end-meurtrier-pour-des-pietons-victimes-actu31013.html
 450 000 ireo mpamily fiara: http://www.securiteroutiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-interministeriel-de-la-securite-routiere/bilans-annuels/bilans-annuels-de-la-securite-routiere-en-france
 io haao io dia iharan'ireto famaizana manaraka ireto: http://leplanb.info/La-loi/Alcool.htm
 tahan'alikaola 1,18 g/litatra: http://www.laprovence.com/article/a-la-une/la-ciotat-un-conducteur-ivre-tue-un-enfant-de-11-ans
 mihoatra ny 0,8 mg: http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool%C3%A9mie#France%20
 manoratra hoe: http://www.europe1.fr/France/Paris-le-chauffard-roulait-sans-permis-1179053/
 no manamarika: http://www.leparisien.fr/reactions/faits-divers/pietons-fauches-a-paris-le-chauffard-presente-a-un-juge-ce-mercredi-24-07-2012-2100825.php